Wararka/News – Page 3 – Somali Schools
MUDAHARAAD, HARGEYSA: MACALIMIIN KU MUDAHARAADAY IMTIXAAN LAGA QAADI LAHAA
Wararka/News	23rd July 2018 at 8:57 pm	30 comments
Macalimiinta Dugsiyada Hoose/Dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa mudaharaad la hortegey Xarunta Wasaaradda Waxbarashada Somaliland iyagoo ka cabanaya go’aanka Wasaaraddu ku gaadhey in imtixaan lagu kala saarayo laga qaado macallimiinta dugsiyadaasi oo ay wasaaraddu saluug weyn ka muujisey heerkooda aqooneed. HALKAN HOOSE KA DAAWO MUDAHARAADKA MACALIMIINTA:
BUUGAAG BILAASH AH: MADAXWEYNAHA SOMALILAND OO KU DHAWAAQAY, YAASE LA SIINAYAA
Wararka/News	21st February 2018 at 5:41 pm	1,226 comments
Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu sheegtay inay tayayn doonaan dugsiyada dawladda Somaliland maamusho, waxaanu xusay in arday kor u dhaaftay 160 kun dhigatana Dugsiyada Dawladda inay xukuumaddu ka bixinayso lacagta buugaagta manhajka ee waxbarashada oo caqabad ku ahayd dhaqaale ahaan. Wuxuuna carrabka ku dhuftay in xukuumadiisu lacagtii u horreysay ku shubtay xisaab [account] […]
BARAYAASHA DUGSIYADA XIRFADAHA OO TABABAR LOOGU SOO XIDHAY HARGEYSA
Machadyada, Wararka/News	14th February 2018 at 9:44 pm	712 comments
Macalimiin tiradoodu dhantahay 45 xubnood kana kala yimid qaar ka mid ah Dugsiyada Xirfadaha ee gobolada Somaliland ayaa loo soo afmeeray tababar u socdey muddo 15 maalmood ah. Tababarkan oo ay ku baranayeen mihnadaha kala ah biyogelinta, makaanikada, dabgelinta guryaha iyo hagaajinta qaboojiyeyaasha ayaa waxaa gebagebadiisii kelmedo dardaaran u ah […]
BASLAYAASH HARGEYSA OO DUGSIYADA KU DIRQIYEY INAY GUNNO FASAX SIIYAAN
Wararka/News	12th February 2018 at 7:43 pm	753 comments
“Go’aanka aanu maanta qaadanay uunbaa soconaya, wixii hore waxba kama jiraan. Iskuuladana waxaanu leenahay….” sidaasi waxaa sheegay xubno ka tirsan Guddiga baslayaasha Hargeysa oo ay go’aamo wada jir ah soo wada saareen Badhasaabka Gobolka Maroodijeex, Hargeysa. Shir jaraa’id oo aanay ka hadlin wakiilada iskuulada Hargeysa balse ay saraakiisha Gobolku la […]
WASIIRKA WAXBARASHADA SOMALILAND OO SENEGAL KA SOO LAABTAY
Wararka/News	9th February 2018 at 11:01 am	513 comments
Mudane Faratoon, Wasiirka W. Waxbarashada Somaliland ayaa Warbaahinta Dawladda uga waramay safar uu ka soo laabtay kuna tegey dalka Senegal. Mudane Faratoon ayaa tilmaamay inuu Caasimadda dalkaasi, Dakar, kaga qayb galay shir ku saabsanaa arrimaha Waxbarashada isagoo warbixtan hoos ka muuqata ku muujiyey guulo uu sheegay inuu kala soo guryo […]
NAKADSA OO TABABAR LABO BILOOD SOCONAYA U BILOWDAY ARDAY GAADHEYSA 300 OO ARDAY
Wararka/News	18th December 2017 at 1:42 pm	275 comments
Naadiga NAKADSA ayaa 14 December, 2017 tababar lagu baranayo Maamulka iyo Maareynta, Gargaarka degdega, Nafaqeynta, Saxaafadda iyo Sheybaarka waxa uu u bilaabay arday gaareysa 300 oo arday kuwaa oo isu jira ardayda dhigata Iskuulka Axmed Gurey iyo kuwa kale. Tababarkan oo fulintiisa ay iska kaashanayaan Waaxaha Waxbarashada iyo Tababarka ee […]
JAAMACADDA BARIGA AFRIKA, BOOSAASO: ARDAY KA QALINJEBISEY
Wararka/News	5th December 2017 at 3:14 pm	1,335 comments
Munaasabadan oo lagu qabtay hoolka Jaamacada Bariga Africa ee Magaalada Bosaso, ayaa waxaa ka qayb galay Xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland Maamulka Gobalka Bari , Maamulka Jaamacadda Bariga Afrika [JBA], Waalidiin, Aqoonyahano, iyo Marti sharaf Kale oo badan. Munaasabada oo ahayd mid qaab ahaan ka duwanayd kuwii lagu qaban […]